हिङ के हो? दमदेखि हिस्टेरियासम्म निको पार्ने यसका फाइदा थाहा पाउनुस् | मेरो कलम
‘हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो त बाँकी छ’ भन्ने उखान पक्कै पनि सुन्नुभएकै होला । यसको अर्थ यो बहुउपयोगी र दुलर्भ औषधीको गुण भएको खोटो (चोप) हो । यसको खेती इरान, अफगानिस्तान र भातकका केही भूभागमा गरिन्छ । नेपालमा सिमित केही किसानहरुले यसको खेती गर्ने गरेको पाइन्छ । नागरिकन्यूजमा प्रकाशित एक लेख अनुसार भरतपुर चितवनका किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारीले यसको खेती गर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘विरुवा रोपेको दुई बर्षपछि हिङ निस्कन सुरु हुन्छ । रुखको हाँगाबाट पात निस्कदै गर्दा पातको मुनाबाट गर्मीको समयमा सुगन्धयुक्त चोप निस्किन्छ त्यही नै हिङ हो ।’ हिमाली क्षेत्रका शेर्पा समुदायले यसको उत्पादन एवं बिक्रि गर्ने गर्दछन् । यसको महत्व के कस्तो छ? थाहा पाउनुस्ः
हिङले दम रोग निको पार्छ
दमको रोग भएकाहरुको लागि यो अति प्रभावकारी औषधी हो । कपुर र हिङलाई बराबर मिलाएर साना चक्की बनाउने र तातोपानीसँग बिहान बेलुका सेवन गर्नाले दम रोग निको हुन्छ । सक्कली भनेर नक्कली हिङको किनबेच हुने गरेको पनि प्रसस्तैै सुनिन्छ, त्यसैले शुद्ध हिङ मात्र औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
पेट दुख्ने समस्या निको पार्छ
हिङ पेट सम्बन्धी सबै प्रकारका रोगहरुलाई उपयोगी औषधी हो । हिङ, जाइफल, केशर र मरिच १५/१५ ग्राम सबै बराबर पिनेर धूलो पार्ने र तातो पानी हालेर सानो चक्की बनाएर घाममा सुकाउने । नियमित बिहान र बेलुका १/२ गोली मनतातो पानीसँग खाएमा पेट दुख्ने, घोच्ने र दिसा लगातार लागिरहने लगायतका समस्या समाधान हुन्छ । साथै ग्याष्ट्रिक, अमलपित्त, अजीर्ण, खाना अपच, खाना नरुच्ने जस्ता समस्या भएमा पनि यसको प्रयोग लाभकारी हुन्छ ।
कान दुख्ने, पिप आउने निको पार्छ
शुद्ध तोरीको तेलमा सलुन र हिङ मिलाएर बनाइएको तेल कानमा हालेर सफा गर्नाले कान दुख्ने एवं पाक्ने जस्ता सम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ । कानभित्र खटिरा आउने समस्या भएमा पनि यसको प्रयोग लाभदायक हुन्छ ।
कम्मर दुख्ने समस्या निको पार्छ
भुटेको कालो तिल, धुलो मरिच, घोडताप्रे, सूठोको धुलो, धूलो पिप्ला र हिङलाई बराबर मिसाएर हावा नपस्ने भाडोमा राख्ने र कम्मर दुखेको समयमा सो मिश्रण धुलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर लगाउनाले पनि कम्मर दुखाइबाट राहत मिल्छ ।
महिलाको हिस्टेरिया निको पार्छ
महिलामा हिस्टेरियाको समस्या छ भने हिङ निकै प्रभावकारी औषधी हो । नियमित १ चम्चा भाङको रसमा १ चिम्टी हिङ फिटेर बिहान बेलुका खान दिएमा महिलाको हिस्टेरिया निको हुन्छ ।